ब्लड प्रेसरको औषधि छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रेसरको औषधि बाँचुन्जेल खानु पर्ने हो ? - Nepali Health Media
ब्लड प्रेसरको औषधि छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रेसरको औषधि सधैं खानुपर्छ ? के प्रेसरको औषधि बाँचुन्जेल खानु पर्ने हो ? धेरै मानिसहरु प्रेसर हाइ हुँदा प्रेसर को औषधि हत्त पत्त खान मान्दैनन। किनकि मानिसहरुले भन्दछन “प्रेसर को औषधि खान सुरु गरे पछि यो ‘जीवनभर’ बाँचुन्जेल खानु पर्ने हुन्छ।” त्यसैले प्रेसर को औषधि नै नखाने कुरा गर्दछन।
यो पोस्ट लाई समय निकालेर पुरा पढ्नु होस् र सेयर गर्नुहोस। यो पोस्ट भित्र निकै महत्वपुर्ण कुराहरु लाई समावेश गरिएको छ।
(पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट )
जिवन एक प्रकृति को अमुल्य उपहार हो र यो जीवन पुन पाउन सकिंदैन। प्रेसरको औषधि खाएर कसैको जीवन बाँची रहेको छ भने प्रेसर को औषधि खान बोझ मान्नु हुँदैन। प्रेसर को औषधि को खासै ठुलो असर गर्ने साइड इफेक्ट पनि छैन। यो औषधि खाएर नै जीवन बाँच्न सकिन्छ भने खुसि साथ विज्ञान ले पत्ता लगाई दिएको यो औषधि लाइ अमृत सम्झिएर नियमित खाइ रहनु पर्दछ। किनकि त्यहि औषधिको भरमा तपाईंको दुइ मूठी श्वास अडिएको हुन सक्छ। जीवनको हर मोड लाइ पोजिटिभ तरिकाअनुसार सोच्नु होस र औषधि खान कहिल्यै बोझ नमान्नु होस्।
यो पोस्ट सबैले सेयर गर्नुहोस। तपाईं को एक सेयर धेरै को लागि अमुल्य बन्न सक्छ।
Tags: #nepal #nepalhealth #nepalihealthmedia #nepalihealthtips4blood pressure drugs that should be banned in Nepali4worst blood pressure drugs in Nepali best medicine for high blood pressure in Nepali best natural blood pressure medication in Nepali blood pressure blood pressure and alcohol in Nepali blood pressure and coffee in Nepali blood pressure and diabetes in Nepali blood pressure causes in Nepali blood pressure check in Nepali blood pressure control in Nepali blood pressure definition in Nepali blood pressure diet in Nepali blood pressure hi Blood Pressure High blood pressure high in Nepali blood pressure machine in Nepali blood pressure medication dosage in Nepali blood pressure medicine in Nepali high blood pressure medication over the counter in Nepali high blood pressure medicine in Nepali nepali nepali health nepali health media Nepali Health tips what is the most popular medication for high blood pressure ? in Nepali which high blood pressure medication has the least side effects in Nepali उच्च उच्च रक्तचाप औषधि औषधि छोड्न कसरी कि के को खानु खानुपर्छ गर्ने छैन छोड्न नियन्त्रण पर्ने प्रेसर प्रेसर को औषधि प्रेसर को औषधि जीवनभर प्रेसर घटाउने तरिका प्रेसर हाइ प्रेसर हाई प्रेसरको प्रेसरको औषधि प्रेसरको औषधि छोड्न मिल्छ प्रेसरको औषधि बाँचुन्जेल खानु पर्ने हो प्रेसरको औषधि सधैं खानुपर्छ बाँचुन्जेल ब्लड प्रेसर ब्लड प्रेसर को औषधि भन्ने मिल्छ मिल्दैन रक्तचापको रक्तचापलाई सधैं सधैंभरि हाइ ब्लड प्रेसर को औषधि हो
Previous High Blood Pressure Treatment: उच्च रक्तचाप कसरी भई रहेको छ ? र कसरी कन्ट्रोल गर्ने ?